Zeevou သည်ထိပ်တန်းရုပ်သံလိုင်းမန်နေဂျာနှင့် PMS ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ OTAs များပေါ်တွင်သင်၏မှီခိုမှုကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုအောင်မြင်ဖို့မင်းရဲ့အကူအညီလိုတယ်။
ဒေတာ။ ၎င်း၏အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးချက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်မျှအသုံးပြုသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းသည်ဝင်ရောက်ခွင့်အပေါ်ပထမ ဦး စွာမူတည်သည်။ သင် OTA မှထုတ်လုပ်သော guests ည့်သည်များအတွက်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုသာရှိပါက၎င်းတို့သည်သင်၏ဖောက်သည်မဟုတ် - ၎င်းတို့သည် OTA များဖြစ်သည်။ လုပ်ရန် Big ပြောဆိုချက်ကို? မကြီးဘူး ထွက်ခွာသွားပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်ရာသင်၏ guests ည့်သည်များနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်လိုပါကမကြာမီသင်ရောက်ရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
Zeevou သည်သင့် guests ည့်သည်အားလုံးအတွက်အားလုံးအတွက်စစ်မှန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာများ၏ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုကိုလွယ်ကူစွာတည်ဆောက်နိုင်သည်။ OTA မှလာပြီးနောက် ee ည့်သည်သည် Zeevou တွင်သူတို့ဘွတ်ကင်ကိုအတည်ပြုသည့်အခါစစ်မှန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုအလိုအလျောက်စုဆောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အီးယူမှ data ည့်သည်အချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သောအခက်အခဲများကိုဖယ်ရှားပေးမည့် GDPR-ready features များပင်ရှိသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် (ည့်သည်များ (အီးမေးလ်အောက်ခြေနှင့်ငွေတောင်းခံလွှာများပေါ်တွင်) သင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စဉ်သူတို့နှင့်သင်နှင့်တိုက်ရိုက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသဘောတူညီမှုရနိုင်ကြောင်းသတိပေးသည်။ ဘယ်လိုလဲ? ကျွန်ုပ်တို့၏ package ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ပေးသောတိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်။ ဆိုက်ကို အသုံးပြု၍ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရုံသာမကသင်၏ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာများကို ဖန်တီး၍ ဘလော့ဂ်ကိုပင်စီမံနိုင်သည်။ သင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် guests ည့်သည်များအတွက်အထူးသဘောတူညီမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိုပါကသီးခြားဘောက်ချာကုဒ်ဖြင့်အစပြုနိုင်သောမြှင့်တင်ရေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ၊ နောင်တွင်သင်နှင့်တိုက်ရိုက်စာအုပ်ဆိုင်ရေးရန်သူတို့ကိုအားပေးရန် guests ည့်သည်များနှင့်မျှဝေပါ။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းများပြုလုပ်လိုပါသလား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့် SEO အင်္ဂါရပ်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ site ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ပေါ်လာနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သော့ချက်စာလုံးများကို optimization အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးသောဆိုက်တွင်ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများရှိသည်။
အဲဒီမှာငါတို့သွားကြသည်။ ဒါကငါတို့ OTA ကော်မရှင်များကိုဖယ်ရှားပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ပါအိုကေ။ အပြုအမူအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်နည်းပညာသည်မလုံလောက်ပါ။ လိုအပ်တဲ့သဘောထားဟာအပြောင်းအလဲဖြစ်တယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှသာရနိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်တိုက်ရိုက်စာအုပ်ဆိုင်တော်လှန်ရေး!
ယနေ့ Zeevou ကိုစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်သင့်ကိုကူညီပါ။